Nandefa ny kinova farany an'ny macOS Big Sur 11.5 ho an'ny mpampiasa rehetra | Avy amin'ny mac aho
Apple dia mandefa ny faritra zana ny kinova farany indrindra amin'ny rafi-piasany ho an'ny fitaovana rehetra. Vao omaly izy no nandefa ireo farany ho avy, dia ireo ho an'ny Mac sy iPad, ny sisa amin'ireo fitaovana dia efa nohavaozina Miatrika ny dingana farany ho an'ireo kinova vaovao miaraka amin'ny macOS Monterey vaovao izy ireo.
Andro iray taorian'ny nahatongavan'ireo kinova ofisialin'ny iOS, watchOS ary tvOS, Tonga amin'ny fomba ofisialy ny kinova farany an'ny macOS 11.5 Big Sur sy iPadOS 14.7. Amin'ity tranga ity izay ananantsika ao amin'ny macOS Big Sur 11.5 no efa nolazainay tamin'ny fotoana nanolorana an'ity kinova ity, ny macOS Big Sur 11.5 vaovao dia ahitana ireto fanatsarana manaraka ireto ho an'ny Mac:
Ny tranomboky podcast dia mamela anao hisafidy ny hijerena ireo seho rehetra sa ireo manaraka fotsiny.
Ny fampiharana Music dia mety tsy manavao ny isa isa sy ny daty nilalao farany tao amin'ny tranomboky.
Mety tsy mandeha ny carte Smart raha miditra amin'ny Macs miaraka amin'ny puce M1.
Raha ho anay manokana, ny rafitra fiasa macOS Big Sur 11.5 dia manana habaka 2,93 GB amin'ny MacBook 12-inch, saingy mety miovaova arakaraka ny fitaovana io habaka io ka aza manahy raha zavatra lehibe kokoa na kely kokoa ao amin'ity dia hiankina amin'ny Mac nametrahana azy. Tsarovy aho hametraka ny kinova farany amin'ny safidin'ny rafitra ary tsindrio ny fizarana fanavaozana, arakaraka ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisanao mety mila mihoatra na kely ny fametrahana azy, na ahoana na ahoana Manoro hevitra izahay ny hitazona ireo fitaovana mifamatotra amin'ny loharano lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » Navoaka farany ho an'ny mpampiasa rehetra ny kinova farany an'ny MacOS Big Sur 11.5
Apple namoaka Safari Technology Preview 128